ဒူဒူကြီး: "Oil Fired Drum Type Water Tube Boiler Mountings & Fittings"
"Oil Fired Drum Type Water Tube Boiler Mountings & Fittings"
oil fired drum type water tube boiler တွေမှာ၊ တတ်ဆင်ထားလေ့ရှိတဲ့ mountings & fittings တွေကတော့ main steam stop valve, auxiliary steam stop valve, thermometer, pressure gauges, blow down valve, run down valve, chemical dosing valve, scum down valve, feed check valve, salino-meter, water level gauge glass နဲ့ safety valve တို့ဖြစ်ပြီး၊ regular inspection အနေနဲ့ ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းကို၊ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။
အရေးကြီးတဲ့ boiler mountings တွေကတော့၊ safety valves, main steam valve, auxiliary stem stop valve, feed check valve or control valve, water level gauges, pressure gauge & connections, air release cock, sampling connection, blow down valve, scum valve, whistle stop valve, automatic feed water regulator, low alarm level, high alarm level, super heater circulating valves နဲ့ soot blowers တို့ဖြစ်ပါတယ်။
'safety valves ကို boiler ရဲ့ body မှာ အစုံလိုက် (၂) လုံး တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ boiler အတွင်း steam pressure မြင့်တက်လာပြီး၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ setting pressure သို့ရောက်ရှိတဲ့အခါ၊ safety valve အလိုအလျှောက်ပွင့်ကာ steam ကို boiler ရဲ့ ပြင်ပသို့၊ စွန့်ထုတ်ခြင်းဖြင့် pressure ကိုလျှော့ချပါတယ်။ လက်တွေ့မှာ steam pressure ကို (4. 8 kg/ cm2 ~ 5.2kg/ cm2) ခန့်၊ အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ safety valve ရဲ့ setting အား (7 kg/ cm2) လောက်မှာ ချိန်ညှိထားလေ့
'main steam valve' ကို 'main steam stop valve' လို့လည်းခေါါပြီး၊ non-return valve အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ boiler နဲ့ အနီးဆုံးနေရာ steam ထွက်လာရာ လမ်းကြောင်းမှာ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ non-return valve အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ 'auxiliary steam stop valve' ကတော့၊ 'main steam valve' ရဲ့ အရံ spare valve ဖြစ်ပါတယ်။
'feed check valve' ဟာ non-return valve အမျိုးအအစားဖြစ်ပြီး၊ အစုံလိုက် (၂) လုံး တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ တလုံးကို main valve အဖြစ်၊ အသုံးပြုကာ အခြားတလုံးကိုတော့ auxiliary သို့မဟုတ် stand by valve အနေနဲ့၊ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ feed check valves တွေဟာ၊ boiler အတွင်းသို့ feed water ပေးသွင်းတဲ့ valve တွေဖြစ်ပြီး၊ အဖွင့်နဲ့ အပိတ် opened/ closed position အနေအအထားကို indicator ဖြင့်၊ ဖော်ပြပါတယ်။
boiler drum အတွင်းမှ၊ 'ရေ' level အား၊ monitoring အဖြစ်၊ ဖော်ပြပေးမယ့် 'water level gauges' တွေကိုလည်း၊ အစုံလိုက် (၂) ခု တတ်ဆင်ထားသလို၊ boiler drum နဲ့ super heater အတွင်းမှ steam pressure ပမာဏကို၊ အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် 'pressure gauges' တွေကိုလည်း၊ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။
'scum valve' ကတော့ boiler drum အတွင်းမှ၊ 'ရေ' မျက်နှာပြင်ရဲ့ အထက်မှာ ရှိနေမယ့် impurities တွေကို၊ ဖယ်ရှားတဲ့အခါ အသုံးပြုရန် တတ်ဆင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍သဘေ်ာရဲ့ whistle သို့မဟုတ် horn ကို steam whistle အနေနဲ့ အသုံးပြုခဲ့လျှင်၊ steam supply ကိုပေးပို့ရန်၊ 'whistle stop valve' အား၊ တတ်ဆင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
boiler ကို အချိန်အတော်ကြာ ရပ်တန့်ပြီးမှ၊ ပြန်လည်မောင်းနှင်တဲ့အခါနဲ့ boiler အတွင်းမှ ရေတွေကို၊ drain အနေနဲ့ ဖောက်ချပြီး၊ ပြန်လည်မောင်းနှင်တဲ့ အခါတွေမှာ၊ drum အတွင်းရှိ steam နေရာမှာ၊ အစားထိုးနေရာယူနေတဲ့ 'လေ' တွေကို၊ 'air released cock' မှတဆင့် ဖယ်ထုတ်ပါတယ်။
'sampling connection' ကိုတာ့၊ boiler feed water ကို analysis လုပ်ရန်၊ 'ရေ' နမူနာ sample ရယူမယ့် နေရာမှာ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ blow down valve ဟာ boiler အတွင်းမှ 'ရေ' သို့မဟုတ် 'steam' ကို၊ drain အနေနဲ့ ဖောက်ချတဲ့အခါ၊ အသုံးပြုပြီး၊ boiler ရဲ့ အောက်ခြေနား နေရာမှာ၊ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။
'automatic feed water regulator' အား၊ boiler feed water line ရဲ့ main feed check valve အနီးမှာ၊ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ sensor element တွေကိုသုံးကာ water level နဲ့ load ဆိုတဲ့ steam pressure အနည်းအများပေါါမူတည်ပြီး၊ boiler သို့ပေးသွင်းမယ့်် feed water အနည်းအများကို၊ automatic feed water regulator မှ ချိန်ညှိပေးပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် 'automatic feed water regulator' မှ boiler drum ရဲ့ water level ကို၊ control အနေနဲ့ ထိမ်းညှိပေးတယ်လို့၊ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Automatic Level Control Systems - oil fired drum type water tube boiler တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ 'automatic level control systems' တွေကို On/ Off control system နဲ့ Modulating control system ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ Modulating control system မှာ Single element water level control, Two element water level control နဲ့ Three element water level control တို့အဖြစ်၊ ထပ်မံခွဲခြားကာ အသုံးပြုပါတယ်။
"On/ Off control system" - water level sensing element အဖြစ်၊ magnetic switch ကို၊ float level control element အနေနဲ့ တတ်ဆင်ထားသလို၊ 'conductivity probe' လို့ခေါါတဲ့ 'capacitance probes' တွေကိုလည်း၊ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ fixed switching levels လို့ခေါါတဲ့ feed water pump ရဲ့ On/ Off function အတွက်၊ level probes (၂) စုံကို အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး၊ level probes တွေမှတဆင့်၊ On/ Off switching levels ကို၊ adjustment အနေနဲ့၊ လိုအပ်သလို ချိန်ညှိပေးပါတယ်။
Fig. On/ Off control system
On/ Off control system ကို steam generation rate အနေနဲ့ 5, 000 Kg / h သို့မဟုတ်3MW ခန့် ပမာဏထုတ်ပေးတဲ့ boiler တွေမှာသာ၊ တတ်ဆင် အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ On/ Off control system အသုံးပြုထားတဲ့ automatic level control application မှာ၊ switching activated ဖြစ်ရာမှ၊ feed water pump ရုတ်တရက် 'ထ' လည်ပြီး၊ 'cold' feed-water ဆိုတဲ့ 'ရေအေး' တွေကို၊ မြင့်မားတဲ့ relatively high flow-rate ဖြင့်၊ ပေးသွင်းလိုက်တဲ့အတွက်၊ boiler အတွင်းမှ steam pressure ဟာ၊ ရုတ်တရက် လျှင်မြန်စွာ ကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
burner ဟာ steam pressure အား၊ ထိန်းညှိနိုင်ရန် continuously vary အနေနဲ့ အဆက်မပြတ်လည်လိုက်၊ ရပ်လိုက် အနေအထားဖြင့် firing ဆိုတဲ့ 'မီးထိုး' ခြင်းကို ဆောာင်ရွက်ပေးနေမှာဖြစ်သလို၊ burner controls ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ wear and tear ဆိုတဲ့ ပွန်းစား ပျက်စီးမှုတွေ၊ တိုတောင်းတဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာ တခုအတွင်း ဖြစ်ပွားလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် boiler ရဲ့ water drum မှာ temperature cycling တွေပေါါပေါက်လာပြီး၊ steam flow-rate ဟာ 'saw-tooth' type ပုံသဏ္ဍန်ဖြင့် စီးဆင်းခြင်းကြောင့် boiler ရဲ့ 'efficiency' ကျဆင်း သွားတတ်ပါတယ်။
"Modulating control system" - water level sensing element အဖြစ်၊ float switch, capacitance probes နဲ့ differential pressure cells တွေကို၊ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ modulating control system မှာ feed water pump ဟာ ဆက်တိုက်မရပ်မနား continuously လည်ပတ်နေပြီး၊ feed water pump နဲ့ boiler ကြားမှာ တတ်ဆင်ထားတဲ့ automatic feed water regulating valve မှတဆင့်၊ လိုအပ်မယ့် steam demand အပေါါမူတည်ကာ၊ feed water flow-rate ကို control အနေနဲ့ ထိမ်းညှိပေးပါတယ်။
Fig. Modulating control system
modulating control system ကို၊ အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ drum အတွင်းမှာ တည်ငြိမ်တဲ့ water level stability အား၊ ရရှိစေနိုင်သလို၊ steam flow-rate ကိုလည်း၊ 'smooth' အနေနဲ့ ချောမွေ့စွာ စီးဆင်းစေနိုင်တာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ level control valve လို့ခေါါတဲ့ modulating valve ပိတ်သွားရာမှ၊ feed water pump မှာ အပူလွန်ပြီး overheating မပေါါပေါက်စေရန်၊ recirculation ဆိုတဲ့ spill-back line ကို တတ်ဆင်ထားပြီး၊ feed water pump မှာ၊ minimum flow-rate ဖြင့်၊ feed water အား စီးဆင်းစေပါတယ်။ recirculation အား valve သို့မဟုတ် (5 mm ~7mm) အရွယ်အစားရှိတဲ့၊ orifice plate ကို၊ အသုံးပြုပြီး ဆောင်ရွက်စေပါတယ်။
ဒါ့အပြင်၊ modulating control system ကို၊ boiler feed-water pump ရဲ့ speed အား၊ varying အနေနဲ့ အတိုး၊ အလျှော့ပြောင်းလဲ လည်ပတ်ကာ၊ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် boiler water level sensing element မှတဆင့်၊ ရရှိလာတဲ့ modulating signal ကို၊ electrical frequency controller လို့ခေါါတဲ့ variable frequency control drive တနည်းအားဖြင့် VFD သို့ပေးပို့ကာ၊ feed-water pump motor ရဲ့ speed အား၊ ပြောင်းလဲလည်ပတ်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Recirculation of feedwater
variable speed drive feed-water pump ဖြင့် တွဲဖက်တတ်ဆင်တဲ့အခါ၊ with recirculation နဲ့ without recirculation ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ with recirculation application အဖြစ်၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုရာမှာ steam demand အနေနဲ့ boiler ရဲ့ load နည်းနေစဉ်ကာလမှာ၊ feed water pump motor ဟာ၊ minimum speed ဖြင့်လည်ပတ်နေပြီး၊ recirculation line မှတဆင့် feed water ကို စီးဆင်းစေပါတယ်။ without recirculation application မှာတော့ low boiler load ဆိုတဲ့ steam demand မရှိတဲ့အခါ၊ motor controller မှတဆင့် feed - water pump ကို၊ ရပ်တန့်ထားပါတယ်။ feed - water pump ပြန်လည်တဲ့အခါ frequency controller ဟာ၊ motor speed ကို rump-up အနေနဲ့ တဖြည်းဖြည်း၊ တိုးမြှင့် ယူသွားခြင်းဖြင့် power consumption ကို၊ လျှော့ကျသက်သာစေပါတယ်။
"Single element water level control" - modulating control ရဲ့ proportional control method ဖြစ်ပြီး၊ rated capacity အတွင်း အသုံးပြုမယ့်၊ applications တွေမှာ၊ majority အဖြစ်၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့ control system လည်းဖြစ်ပါတယ်။ proportional control ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ low steaming rates ဖြင့် အသုံးပြုနေစဉ် water level ဟာ higher အနေနဲ့ မြင့်မားနေမှာ ဖြစ်သလို၊ high steaming rates ဖြင့် အသုံးပြုနေစဉ်မှာတော့ lower အနေနဲ့ နိမ့်ကျသွားရာမှတဆင့် water drum အတွင်း falling level control characteristic တွေ၊ ဖြစ်ပေါါလာနိုင်ပါတယ်။
boiler ကို rated capacity အတွင်း အသုံးပြုနေစဉ်၊ steam demand ကို၊ increase အနေနဲ့ တိုးမြှင့် အသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါ၊ boiler မှ steam pressure ဟာ၊ initial fall အနေနဲ့ သိသိသာသာ၊ ထိုးကျသွားပြီး၊ control system မှတဆင့် burner firing rate အား မြင့်တင်ပေးမှာဖြစ်သလို၊ evaporation rate ဟာလည်း၊ မြင့်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ evaporation rate မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်၊ drum water အတွင်းမှာ၊ steam bubbles တွေပိုမို၊ ပေါါပေါက်လာပြီး၊ less dense အနေနဲ့ 'ရေ' နဲ့ အတူ အနည်းငယ်သာ ရောနှောနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
steam demand ကို၊ ရုတ်တရက် sudden load အနေနဲ့ ပမာဏများစွာ၊ အသုံးပြုလိုက်တဲ့ အခါ၊ boiler မှ steam pressure ဟာလည်း၊ further reduced အနေနဲ့ ထပ်မံ ကျဆင်းသွားပြီး၊ feed water ဟာ steam နေရာမှာ flash in အဖြစ်၊ တွန်းထိုးဝင်ရောက်လာမှာ ဖြစ်သလို၊ control system မှတဆင့် burner firing rate အား၊ maximum အထိ၊ မြင့်တင်ပေးလိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာ drum water အတွင်း၊ steam bubbles တွေမြောက်များစွာပေါါပေါက်လာပြီး၊ steam ရဲ့ density လည်း ကျဆင်းသွားပါတယ်။
steam bubbles တွေဟာ water mixture အဖြစ် 'ရေ' နဲ့ရောကာ ဖွဲ့တည်နေခြင်းကို၊ 'swell' လို့ခေါါပါတယ်။ swell ကြောင့် drum ရဲ့ water level မြင့်တက်လာသလို၊ level control detector မှ မှားယွင်းယူဆပြီး၊ feed-water control valve အား၊ closed အနေအထားဖြင့် 'ပိတ်' သွားစေပါတယ်။ အမှန်တော့ လိုအပ်လာတဲ့ high steam demand ကြောင့်၊ water drum အတွင်းသို့ 'ရေ' ပေးသွင်းခြင်းကို၊ ပိုမိုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ လက်တွေ့မှာတော့ feed-water control valve 'ပိတ်' သွားပြီး၊ 'ရေ' ပေးသွင်းခြင်းအား၊ ရပ်တန့်လိုက်ခြင်းကြောင့် falling level ဆိုတဲ့ drum water low level condition အခြေအနေ ပေါါပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် falling level control characteristic လို့၊ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ falling level control characteristic ဖြစ်ပေါါတတ်တဲ့အတွက် နောက်ပိုင်းမှာတော့၊ single element water level control အစား၊ Two element water level control ကို၊ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုလာကြပါတယ်။
"Two element water level control" - first element အဖြစ် drum water မှ level signal နဲ့ second element အဖြစ်၊ steam flow meter မှ flow signal တို့ကို၊ sensing element အဖြစ် အသုံးပြုထားပါတယ်။ steam flow meter ကို၊ boiler ရဲ့ steam discharge line မှာ တတ်ဆင်ထားပြီး၊ steam demand ကို၊ increase အနေနဲ့ တိုးမြှင့် အသုံးပြုရန်လိုအပ်မယ့် high steam loads condition အခြေအနေမှာ၊ level controller set point ကို၊ steam flow meter မှ flow signal ဖြင့်၊ မြှင့်တင်ပေးတဲ့ control system ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Two element boiler water level control
frequent သို့မဟုတ် sudden changes ဆိုတဲ့ steam demand ကို၊ ရုတ်တရက်၊ ပမာဏများစွာပြောင်းလဲ အသုံးပြုရတဲ့ application တွေမှာ 'Two element boiler water level control' ကို၊ တတ်ဆင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်် boiler ရဲ့ rated capacity ထက် (25 %) ခန့်် load အပြောင်းအလဲရှိတတ်တဲ့ applications တွေမှာ၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
"Three element water level control" - first element အဖြစ် drum water မှ level signal နဲ့ second element အဖြစ်၊ steam flow meter မှ flow signal တို့အပြင်၊ third element အဖြစ် feed - water pump မှ boiler drum အတွင်းသို့ ပေးသွင်းမယ့် feed water ရဲ့ flow rate ကိုပါ၊ sensing element အဖြစ် အသုံးပြုထားပါတယ်။ boiler တွေကို အရည်အတွက် တလုံးထက်ပိုပြီး တတ်ဆင်ကာ၊ feed - water အား common တနည်းအားဖြင့် 'pressurised ring main' အနေနဲ့ ပေးသွင်းတဲ့ applications တွေမှာ၊ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ control system လည်းဖြစ်ပါတယ်။
boiler တလုံးးစီမှာ steam demand ကြောင့်၊ water drum အတွင်းသို့ 'ရေ' ပေးသွင်းရာမှာ၊ feed-water ring main အတွင်း၊ vary အနေနဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ပေါါပေါက်လာတတ်ပြီး၊ 'ရေ' ပေးသွင်းရန်လိုအပ်မယ့် boiler မှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ feed water ရဲ့ flow rate signal မှတဆင့် automatic feed water regulating valve မှတဆင့်၊ feed water flow - rate ကို control အနေနဲ့ ထိမ်းညှိပေးပါတယ်။
'super heater circulating valves' ဟာ boiler ကို၊ စတင်မောင်းနှင်ပြီး၊ initial warming ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ၊ steam flow အား control အနေနဲ့ ထိမ်းညှိပေးသလို၊ air vent အဖြစ်လည်းဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ soot blower ဟာ၊ boiler အတွင်းမှ wall, surface နဲ့ tubes တွေပေါါ တင်ရှိနေတဲ့ soot တွေနဲ့ combustion deposit တွေကို compressed air သို့မဟုတ် pressurized steam အား အသုံးပြုပြီး၊ အပြင်ဘက်သို့ မှုတ်ထုတ်ပေးပါတယ်။
water tube boilers တွေကို fire tube boilers တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်၊ 'ရေ' ပမာဏ အနည်းငယ်သာ၊ အသုံးပြုပြီး၊ steam pressure ပမာဏ မျာများ ရရှိ စေရန်၊ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ မတော်တဆ မီးလောင်ပေါက်ကွဲထွက်ခြင်း ဆိုတဲ့ 'accidents' ဖြစ်ပေါါရန်၊ အခွင့်အလမ်းလည်း၊ ပိုများတဲ့အတွက်၊ အထိမ်းအဖြစ် အထိုင် 'mounting' များကို ပိုမိုတတ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ပါတယ်။ mounting တွေကို shell plate အပေါါမှာအထိုင်ချကာ၊ တတ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်၊ boiler shell, mounting နဲ့ fittings တွေကို regular inspection အဖြစ်၊ ဂရုစိုက်ကာ၊ စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပြီး စစ်ဆေးရာမှာ
shell plate တွေရဲ့ internal နဲ့ external မျက်နှာပြင်အက်ကွဲမှု crack, corrosion wastage နဲ့ deformation များကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ အဓိကအရေးကြီးတဲ့ mounting တွေကို boiler မှ၊ ဖြုတ်ကာ စစ်ဆေးခြင်း၊ gauge glasses, safety valves, feed check valves တွေနဲ့ steam stop valves တွေရဲ့ corrosion, erosion, strength နဲ့ correct operation အခြေအနေများကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ internal feeding နဲ့ chemical injection ကြောင့် pipeline တွေမှာ၊ oxygen pitting ဆိုတဲ့ oxidization ဖြစ်ပေါါပြီး၊ သံချေးတက်ကာစားသွားတဲ့ အချိုင့်တွေနဲ့ corrosion အခြေအနေများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ steam pipelines တွေနဲ့ drain pipeline တွေကို 'တူ' ဖြင့် 'ခေါက်' ကာ hammer test အနေနဲ့ စစ်ဆေးခြင်း၊ soot blower nozzles တွေကို၊ correct sweep pattern အနေအထားမှာ၊ ရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ air register ကို၊ စစ်ဆေးသန့်ရှင်းခြင်း၊ boiler manhole နဲ့ manhole cover ကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ strained door studs တွေ၊ stripped နဲ့ slack nuts တွေ၊ distorted dogs တွေရဲ့အခြေအနေကို စစ်ဆေးခြင်း၊ boiler နဲ့ foundation structure attachment တွေမှာ လုံလောက်တဲ့ expansion ရှိမရှိ၊ adequate provision for expansion နဲ့ 'yield' သို့မဟုတ် bend and cracking ဆိုတဲ့ ကွေးကောက်တွန့်လိမ်ခြင်းနဲ့ အက်ကွဲမှုအခြေအနေကိုစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ shell plating နဲ့တွဲဆက်ထားတဲ့ welding attachment တွေဖြစ်တဲ့၊ cradles, feet နဲ့ rolling stay lugs တွေမှ အက်ကွဲမှု အခြေအနေကို စစ်ဆေးခြင်း အစရှိတာတွေကို ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။
Refractory Material - boiler ရဲ့ furnace ဟာ fuel burning လောင်ကျွမ်းခြင်းကြောင့် အပူချိန်အမြင့်မားဆုံး လက်ခံ ရရှိတဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ furnace wall နံရံတွေကို၊ အပူချိန်ခံနိုင်စေရန် တည်ဆောက်ထားပြီး၊ အသုံးပြုထားတဲ့ material ကို 'refractory material' လို့ခါါပါတယ်။ refractory material ဟာ၊ non-metallic materials ဖြစ်ပြီး၊ အပူချိန် (538ံC) သို့မဟုတ် (1000ံF) အထိ ခံနိုင်ရည် ရှိကာ၊ boiler နဲ့ incinerator တွေရဲ့ furnace တွေမှာသာမက၊ reactors တွေမှာလည်း ကြားခံ lining အဖြစ် အသုံးပြုကြပါတယ်။ refractory materials ဟာ၊ မြင့်မားတဲ့အပူချိန်မှာ chemically and physically ဂုဏ်သတ္တိတွေ ပြောင်းလဲမှုမရှိရန်လိုအပ်သလို၊ boiler ရဲ့ furnace မှာ၊ အသုံးပြုတဲ့အခါ thermal shock ၊ thermal conductivity နဲ့ thermal expansion တို့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်ပါတယ်။
Fig. Refractory material in boiler furnace
ယေဘုယျအားဖြင့် refractory materials ကို 'alumina' လို့ခေါါတဲ့ aluminium oxides, silicon နဲ့ magnesium တို့မှ တဆင့်ရောစပ်ထုတ်လုပ်ကာ၊ calcium oxide အနည်းငယ်ပါဝင်သလို fireclays လည်း ရောစပ်ပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်။ တချို့နေရာတွေမှာတော့၊ လိုအပ်ချက်အရ zirconia ဆိုတဲ့ refractories အမျိုးအစားကို အသုံးပြုပါတယ်။ silicon carbide နဲ့ graphite ကို လည်းထည့်သွင်းအသုံးပြုလေ့ရှိပြီး၊ oxygen နဲ့ မထိတွေ့ရတဲ့ furnace တွေ၊ အတွက်သာ ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
refractories အမျိုးအစားတွေကို chemical composition အရခွဲခြားတဲ့အခါ၊ RO2 group ဆိုတဲ့ Ex- silica (SiO2), 'acidic refractories' group ဆိုတဲ့ Zirconia (ZrO2), R2O3 group ဆိုတဲ့ alumina (Al2O3), 'neutral refractories' group ဆိုတဲ့ chromia ( Cr2O3) နဲ့ carbon, RO group ဆိုတဲ့ magnesia (MgO) ဆိုပြီးတွေ့ရပါတယ်။ ထုတ်လုပ်ပုံနည်းလမ်း method of manufacture အရ dry press process, fused cast, hand molded, normal formed, fired formed, chemical bonded formed နဲ့ un-formed ဆိုပြီးတွေ့ရပါတယ်။ physical form ပုံသဏ္တွန်အနေနဲ့ကတော့ shaped နဲ့ unshaped ဆိုပြီးသာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. (A) - Firebricks refractory (shaped), (B) - Mouldable refractory (unshaped)
'mouldable refractory' ကို၊ direct exposure to radiant heat ဆိုတဲ့ flame နဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မယ့် နေရာတွေမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ အသုံးမပြုခင် အမှုန့်ဖြစ် သွား စေရန်၊ pounded အနေနဲ့ ထုထောင်းပြီးမှ " မံ " ပါတယ်။ 'castable refractory' ဟာ၊ အဆောက်အဦးဆောက်တဲ့နေရာမှာ၊ အသုံးပြုတဲ့ ဘိလပ်မြေကဲ့သို့ 'အမှုန့်' ဖြစ်ပြီး၊ water walls ရဲ့ အနောက်ဖက်နံရံတွေ တနည်းအားဖြင့် flame နဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ မှုမရှိမယ့်၊ နေရာတွေမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ 'plastic chrome core refractory' ကိုတော့ studded water walls လိုနေရာတွေမှာ၊ အသုံးပြုပါတယ်။ plastic chrome core refractory ဟာ၊ အလွန်မြင့်မားတဲ့ အပူချိန်ကို ခံနိုင်ပေမယ့်၊ mechanical strength အလွန်နည်းပါးပါတယ်။ steel studs တွေထဲသို့ ထုထောင်းထည့်ပြီး၊ tube တွေနဲ့ welded တွေကို တွဲဆက်ရန်အသုံးပြုပါတယ်။ addition strength ရစေဖို့ tube အပေါါ" မံ" ထားတဲ့၊ refractory နဲ့ တွဲဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
refractory "မံ" တဲ့အခါ၊ thermal expansion ကြောင့် ပြန့်ထွက်လာရန် နေရာ အနည်းငယ်ချန်ပေးရပါတယ်။ နေရာမချန်ထားတဲ့အခါ undue stresses ကြောင့်၊ attachment နေရာတွေ အက်ကွဲတတ်ပါတယ်။ refractory "မံ" ပြီး တဲ့အခါ၊ ဆက်တိုက်မီးထိုးပြီး steam pressure မတင်သင့်သလို၊ အသစ် "မံ" ထားတဲ့ refractory တွေဟာ၊ thermal stress ကြောင့် အက်ကွဲတတ်တဲ့အတွက် boiler ကို မောင်းလိုက် ရပ်လိုက်လုပ်ကာ မီးထိုးသင့်ပါတယ်။
boiler shut down အနေနဲ့ အသုံးမပြုပဲ လုံးဝရပ်တဲ့အခါ၊ post - purging period ပြီးဆုံးချိန်မှာ၊ air damper ကိုလည်း တပြိုင်တည်း လိုက်ပိတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အကယ်၍ damper မပိတ်တဲ့အခါ၊ ပြင်ပမှဝင်လာတဲ့ cold air impingement လေအေးနဲ့ မီးထိုးပြီးစ furnace ထဲမှ၊ hot refractory တို့ထိတွေ့ပြီး၊ 'surface flaking' လို့ခေါါတဲ့ refractory မျက်နှာပြင်အဖတ်လိုက်ကွာကျမှု တနည်းအားဖြင့် 'spalling' တွေ ဖြစ်ပေါါလာနိုင်ပါတယ်။ spalling ဟာ refractory wall ရဲ့ thickness အထူကို လျှော့ပါးစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် flame impingement နဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုကြောင့် carbon deposit တွေ၊ refractory အကြားစိမ့်ဝင်ရာမှ၊ spalling ဖြစ်ပေါါတတ် ပါတယ်။ fuel မှာပါဝင်တဲ့ vanadium နဲ့ sodium salts တွေကြောင့်လည်း၊ refractory molten slag အဖြစ် အတုံးလိုက် ကွာကျတတ်ပြီး၊ refractory wall ရဲ့ thickness အထူကို လျှော့ပါးစေတတ်ပါတယ်။
boiler ကို firing အနေနဲ့ 'မီးထိုး' တဲ့အခါ flame နဲ့ flue gas တွေ furnace wall မှ၊ အပြင်သို့၊ ထွက်မသွားစေရန် refractory material ဖြင့် "မံ" ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် furnace wall နံရံတွေမှာ၊ refractory materials တွေကို " မံ " ပြီးသုံးတဲ့ အခါ၊ spalling ဆိုတဲ့ မျက်နှာပြင် အဖတ်လိုက်ကွာကျမှုနဲ့ molten slag ဆိုတဲ့ အတုံးလိုက်ကွာကျ မှုတွေကြောင့်၊ မကြာခဏ ပြန်လည်ပြီး re-install အနေနဲ့ "မံ" ပေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် vertical walls ဒေါင်လိုက်နံရံမှာ၊ ကွာကျမှုတွေပိုမို ဖြစ်ပေါါလေ့ရှိပါတယ်။
boiler ဟာ၊ furnace အတွင်း လောင်စာတွေကို အပြည့်အဝလောင်ကျွမ်းစေပြီး၊ အပူဓါတ်ဆိုတဲ့ 'heat' အား၊ ဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။ လောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ရလာတဲ့ အပူကို၊ 'ရေ' ထည့်သွင်းထားတဲ့ tube တွေထံသို့ heat transfer အနေနဲ့၊ အပူစီးကူးစေပြီး steam အဖြစ်ပြောင်းလဲယူခြင်းဖြစ်ကာ၊ ရရှိလာတဲ့အပူမှာ ဆုံးရှူံးမှုမဖြစ်ပေါါစေရန်၊ 'ရေ' ထည့်သွင်းထားတဲ့ tube တွေရဲ့ နံရံ တနည်းအားဖြင့် water wall တွေရဲ့ အရှေ့ဖက်နံရံနဲ့ အနောက် ဖက်နံရံတွေမှာပါ၊ refractory material တွေနဲ့ "မံ" ထားရပါတယ်။ major heat loss ဆိုတဲ့၊ အပူရှိန်ကောင်းကောင်းလုံလောက်စွာ မရရှိခြင်းဟာ refractory material ကို ဂရုတစိုက်နဲ့ ပုံမှန်စစ်ဆေးပြီး၊ လိုအပ်သလို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေကို မဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ refractory materials တွေကို furnace wall မှာ အသုံးပြုစရာမလိုတဲ့ arrangements တွေ အသုံးပြုလာတာတွေ့ရပါတယ်။ refractory materials အစားထိုး၊ arrangements တွေကို 'tangent tube arrangement' နဲ့ 'mono-wall' သို့မဟုတ် 'membrane wall arrangement' ဆိုပြီး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
"Tangent Tube Arrangement" - မီးလောင်ခန်းနံရံ furnace wall အဖြစ် လုံးပတ်သေးငယ်တဲ့ ပိုက်လုံး tube တွေကို close pitched အနေအထားဖြင့်၊ boiler casing မှာ၊ တခုနဲ့တခု ထိကပ်နေအောင်၊ အလျှားလိုက် စီတန်းနေရာချပြီး၊ အပြင်ဖက်မှ၊ refractory material ဖြင့် "မံ" ကာ၊ boiler casing အပြင်ဖက်မှာတော့ insulation အလွှာနဲ့၊ outer casing တို့ဖြင့် ထပ်မံဖုံးအုပ်ထားတဲ့ arrangement ဖြစ်ပါတယ်။ refractory material ဖြင့် အပြင်ဖက်မှ "မံ" ထားတဲ့ close pitched tubes အလွှာကို၊ inner casing အဖြစ်၊ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Fig. (A) - Tangent Tube Arrangement, (B) - Inner casing, insulation & Outer casing
အကယ်၍ အပူရှိန်ကြောင့် tube တွေမှာ leakage အနေနဲ့ 'ရေ' ယိုစိမ့်မှုပေါါပေါက်ခဲ့လျှင် အပြင်ဖက်မှ၊ "မံ" ထားတဲ့ refractory material အလွှာတွေကို၊ ခွာထုတ်ကာ ပြင်ဆင်ရတဲ့အတွက်၊ ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ leakage ဖြစ်ပေါါနေတဲ့ tube ကို၊ အတိအကျရှာဖွေ သိနိုင်ခဲ့လျှင်၊ ယာယီပြင်ဆင်မှု အဖြစ်၊ 'ရေ' ယိုစိမ့်နေတဲ့ tube ရဲ့ အစအဆုံး နှစ်ဖက်စလုံးမှ၊ plugged ပိတ်ကာ refractory material ဖြင့် အတွင်း၊ အပြင်ထပ်မံ "မံ" ပေးရန်၊ လိုအပ်ပါတယ်။
"Mono-wall သို့မဟုတ် Membrane Wall Arrangement" - tubes တွေကို boiler casing မှာ အလျှားလိုက် စီတန်းနေရာချထားပြီး၊ မီးလောင်ခန်းမှ flu - gas တွေ tubes တွေကြားမှ၊ ယိုစိမ့်စိမ့်ထွက်မသွားစေရန်၊ steel strip တွေကို အသုံးပြုပြီး၊ ဂဟေသား welding ဖြင့် tube တွေနဲ့၊ ချိတ်ဆက်ကာပိတ်ထားပါတယ်။ အပြင်မှ insulation ထပ်မံကာရံပြီး၊ 'cleading' ဆိုတဲ့ သံပြားအလွှာနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။
Fig. (A) - Membrane Wall Arrangement, (B) - longitudinal2- drum, D - type chamber combustion structure with membrane cooling tube wall
membrane wall arrangement ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ refractory material တွေကို၊ ထူထပ်စွာ ဖုံးအုပ်ထားခြင်း မရှိတဲ့အတွက်၊ အပူရှိန်ကြောင့် tube တွေမှာ leakage အနေနဲ့ 'ရေ' ယိုစိမ့်မှုပေါါပေါက်ခဲ့လျှင်၊ အလွယ်တကူ ရှာဖွေတွေ့နိုင်ပြီး၊ ယာယီပြင်ဆင်မှုအဖြစ်၊ 'ရေ' ယိုစိမ့်နေတဲ့ tube ရဲ့ အစအဆုံး နှစ်ဖက်စလုံးမှ၊ plugged ပိတ်ရုံနဲ့တင်၊ လုံလောက်ပါတယ်။
Fig. Calcium silicate boiler insulation asbestos
boiler မှာ insulation အနေနဲ့၊ silicate material တွေမှတဆင့် ထုတ်ယူထားတဲ့၊ 'asbestos' တွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ အပူခံအတားအဆီးအဖြစ်သုံးတဲ့ silicate material asbestos တွေဟာ၊ အရေပြားနဲ့ ထိမိလျှင် ယားယံတတ်သလို၊ ယားလို့ ကုတ်တိုင်း အသားထဲသို့ စူးသထက်စူး၊ စိုက်သထက်စိုက်ကာ၊ သွေးထွက်လာတဲ့ အထိ ဒုက္ခပေးတတ်သလို၊ silicate allergy အနေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခဲ့လျှင်တော့၊ အနာတွေပါဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲကို၊ ဝင်သွားခဲ့လျှင် အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။
Possible Defects in Boiler Furnace - boiler ရဲ့ မီးလောင်ခန်း furnace တွေ၊ အဓိကပျက်စီးရတဲ့ အကြောင်းတွေကတော့ အပူရှိန်လွန်ကဲခြင်း overheating, direct flame impingement ဆိုတဲ့ 'မီးတောက်' ဟာ မီးလောင်ခန်းနံရံ fire wall အား၊ တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ခြင်းကြောင့် ခြောက်သွေ့အက်ကွဲခြင်းနဲ့ နက်ရှိုင်းစွာ အက်ကွဲခြင်း dry & deep crack တို့အပြင် corrosion ကြောင့် ပျက်စီးရခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
"Overheating" - furnace crown နံရံတွေ၊ ပုံပျက်တွန့်လိမ်သွားလောက်တဲ့အထိ ဖြစ်ပေါါတတ်ပြီး၊ vertical boiler တွေမှာ 'ဆီအညစ်အကြေး' sludge တွေ၊ စုပုံလောင်ကျွမ်းခြင်းမှ ပေါါပေါက်ပါတယ်။ overheating ကြောင့်၊ thermal နဲ့ mechanical stress တွေ ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ furnace နဲ့ shell ကို တွဲဆက်ထားတဲ့ ဂဟေသားအဆက်မှာ၊ အက်ကွဲမှု welding seam crack တွေဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။ boiler စတင်မောင်းနှင်ခြင်း၊ ရပ်တန့်ခြင်းတွေကို၊ စနစ်တကျ မဆောင်ရွက်ခဲ့ ရာမှလည်း thermal နဲ့ mechanical stress တွေဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။
"Direct flame impingement" - burner နဲ့ မျက်နာခြင်းဆိုင်နံရံကို၊ ပုံပျက်တွန့်လိမ်သွားစေပြီး၊ မီးတောက် 'flame' ဖြင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါါရပါတယ်။
"Dry & Deep crack" - scaling ဆိုတဲ့၊ ရေချိုးတွေဟာ tube အတွင်းမှာ အလွှာတခုကဲ့သို့ ဖုံးအုပ်နေပြီး၊ tube နဲ့ flame တို့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့တဲ့အခါ dry & deep crack ဆိုတဲ့ ခြောက်သွေ့အက်ကွဲခြင်းနဲ့ နက်ရှိုင်းစွာအက်ကွဲခြင်းတွေ၊ ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ tube အတွင်းမှာ၊ circulating water ရဲ့flow ဟာ အကြောင်းတစုံတခု ကြာင့် နှေးကွေးသွားခဲ့လျှင်လည်းဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။ အက်ကွဲမှု crack ဟာ furnace ရဲ့ entrance အဝ၊ အပေါါပိုင်း upper side နဲ့ tube wall နံရံတွေ မှာဖြစ်ပေါါလေ့ရှိပါတယ်။ အမျိုးအစားမတူတဲ့ indifferent feed water 'ရေ' ကိုမကြာခဏ ပြောင်းလဲ သုံးစွဲခြင်းကြောင့်လည်း furnace crown နံရံတွေမှာ အချိုင့် pitting တွေ ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။
"Corrosion" - boiler ရဲ့ furnace နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ shell plates တွေမှာ သံချေးစားခြင်း corrosion ဖြစ်ပေါါမှု ပိုများတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
coal fired boiler ဆိုတဲ့၊ ကျောက်မီးသွေး coal ကို လောင်စာအဖြစ် အသုံးပြုတဲ့ boiler တွေရဲ့ furnace အရွယ်အစား၊ oil fired boiler ဆိုတဲ့ fuel oil ကို လောင်စာအဖြစ် အသုံးပြုတဲ့ boiler တွေရဲ့ furnace အရွယ်အစားနဲ့ gas fired boiler ဆိုတဲ့ ဓါတ်ငွေ့ gas ကို လောင်စာအဖြစ် အသုံးပြုတဲ့ boiler တွေရဲ့ furnace အရွယ်အစားတွေဟာ တခုနဲ့ တခုကွာခြားပါတယ်။ boiler capacity ခြင်းတူပေမယ့်၊ coal fired boiler furnace ဟာ oil fired boiler ရဲ့ furnace အရွယ်အစားထက် (၂၅ %) မှ (၃၀ %) ခန့် ပိုမိုကြီးမားပါတယ်။
အပူရှိန်ရရှိစေရန် ကျောက်မီးသွေးအား၊ အသုံးပြုတဲ့အခါ လောင်စာဆီကို အသုံးပြုတာထက် အချိန်ပိုကြာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဖြစ်ပေါါလာတဲ့ မီးတောက် flame ရဲ့ အပူရှိန်ကတော့ oil fire burner မှရရှိတဲ့ flame အပူရှိန်ထက် ပိုများပြီး၊ (၁၇၀၀ံC) ပါတ်ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပါတယ်။ မီးတောက်ရဲ့ အပူရှိန်ဟာ furnace မျက်နှာပြင်ဧရိယာ အတော်များများသို့ ပြန့်နှံရောက်ရှိ ပြီး၊ ကျောက်မီးသွေးကို လောင်စာအဖြစ် အသုံးပြုတဲ့ အတွက်၊ ကျောက်မီးသွေးပြာ coal ash တွေ ကျွင်းကျန်ရစ်ခဲ့မှာဖြစ်သလို၊ ash တွေဟာ မီးလောင်ခန်းနံရံ furnace wall တွေမှာ စုပုံကပ်နေခဲ့လျှင် အပူစီးကူးမှုစွမ်းရည် heat transfer efficiency ကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။
coal fired boiler တွေရဲ့ furnace အောက်ခြေမှာ ash တွေ စုပုံကျဆင်းစေရန် တည်ဆောက်ထားပြီး၊ ash တွေကို ဆွဲယူထုတ်လို့ရအောင် arrangement အနေနဲ့ စီမံ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ oil fired boiler နဲ့ gas fired boiler တွေရဲ့ furnace အောက်ခြေဟာ coal fired boiler တွေရဲ့ furnace အောက်ခြေပုံသဏ္ဍန်နဲ့ မတူပဲ၊ flat အနေနဲ့ ပြန့်ပြူးနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ oil fire burner မှ flame emissivity ဟာ coal fired boiler မှ flame ထက် ပိုပြင်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လောင်စာဆီလောင်ကျွမ်းသွားပြီးတဲ့အခါ ash မကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့အတွက် 'near zero % Ash' ရယ်လို့ခေါါဆိုနိုင်ပါတယ်။ gas fired boiler တွေရဲ့ furnace ကတော့၊ oil fired boiler တွေရဲ့ furnace ထက် စာလျှင်၊ ပိုမိုသန့်ရှင်းပြီး၊ heat loading ကို ပိုမိုခံနိုင်အောင် တည်ဆောက်ထားတာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Reference and image credit to : Steam Engineering Tutorials.,
Posted by ကိုထွန်း at 21:24